भाडामा भएपनि सञ्चालन गर्नुस् : गैंडाकोट नगर प्रमुख पौडेल
By vijayafm on	 December 11, 2019 अन्तरवार्ता, कोरोना अपडेट, देश, स्थानीय, स्थानीय तह
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुईवर्ष बितिसक्दा समेतगैंडाकोट नगरपालिकाका अधिकांश वडामा अझै वडा कार्यालय बन्न सकेकाछैनन् । देशमा संघीयता आएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँबाट नै दिने भन्दै नेताहरुले चर्का भाषणहरू गरे । कार्यालय व्यवस्थापनका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार प्रयासरत छन् तरपनि वडा कार्यालयको व्यवस्था हुन नसक्दा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको स्वयम वडा अध्यक्षहरुले बताउँदै आएका छन् । गैंैडाकोटका केही वडामा भवन शिलान्यास गरेका छन् भने धेरैको वडा कार्यालय बन्न सकेको छैन । यस विषयमा सामान्य छलफल भएपनि वडा कार्यालय बनाउने तर्फ तदारुकता नदेखाएको स्थानीयले बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्रराज पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ गैंडाकोट नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलसँग सहकर्मी पवित्रा पराजुलीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
हरेक वडामा वडा कार्यालय स्थापनाका लागि के तयारी छ ?
गैंडाकोट नगरपालिकाअन्र्तगत रहेका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षलाई यदि कार्यालय व्यवस्थापन आफ्नो वडामा गर्नुपर्ने हो भने तयारी गर्नुस् त्यसको दायित्व नगरप्रमुखका नाताले मैले गर्नुपर्ने गर्छु भनेको छु । यदि सेवा दिन गाह्रो नै भएको हो भने भाडामा नै भएपनि गर्नुस् भनेर भनेको छु । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व हाम्रो हो, हामी त्यो व्यस्थापन गर्छाैं ।
वडा अध्यक्षहरुले नै जग्गा व्यवस्थापन गर्दा पनि नगरपालिकाले वास्ता गरेन भनेका छन् नि?
जग्गा भएपनि तत्काल भवन निर्माणका लागि आवश्यक वजेट नभएको हो । वडागत रुपमा विनियोजन गरेको बजेटले भवन निर्माण गरेको भए आपत्ति थिएन तथापि भाडामा राखेर सञ्चालन गर्ने हो भने पनि गर्नुस् भनेर भनेको छु ।
प्रत्येक वडामा नै भवन बनाउने विषयमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
मैले मेरा तर्फबाट गर्ने पहल गरिरहेको छु । यो सबैको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले सबैले त्यो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । जनताहरु कुनै सिफारिस लिन वञ्चित नहोऊन् भन्नका लागि भाडामा नै भएपनि सेवा प्रदान गरौं भनेर भनिसकेकेले त्यसका लागि समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन । स्वास्थ्य कार्यालय जसरी बन्दै छन् क्रमशः वडा कार्यालयहरु बन्दै जान्छन् ।
वडा कार्यालयहरु कति समयसम्म बनिसक्लान्?
त्यसका लागि यतिबेला समयावधि तोक्नुभन्दा पनि राज्यको स्रोत साधन र आन्तरिक बजेट कतिसम्म जुटाउन सक्छौँ अनि कसरी परिचालन गर्न सक्छौँ त्यसमा निर्भर रहन्छ ।